Ịhụnanya na -ebu ụzọ - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Ịhụnanya na -ebute ụzọ
Ịhụnanya, Iwu kachasị ukwuu
Chineke bụ ịhụnanya
N'ịhụnanya, Chineke kuchiri anyị dịka ụmụ ya
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ha bụ ihe okike ọhụrụ
Ndụ site na onyinye nke mmụọ nsọ
Iwu kachasị ukwuu bụ ịmata otu Chineke na ịhụ Onye -nwe Chineke gị n'anya. (Deut 6: 4-5) Jizọs kwusiri ike na iwu kachasị mkpa bụ, “Nụrụ, Izrel: Onyenwe anyị Jehova bụ Chineke anyị, Onyenwe anyị bụ otu. Ị ga -ahụkwa Onyenwe anyị Chineke gị n'anya site n'obi gị dum na mkpụrụ obi gị niile na uche gị niile na ike gị niile. ' Nke abụọ bụ nke a: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ e nyere n'iwu nke ka ndị a ukwuu. ” (Mak 12: 28-31) Ịhụ Chineke n'anya na ịhụ onye agbata obi mmadụ n'anya dị ka onwe ya karịrị àjà nsure ọkụ na àjà nkịtị. (Mak 12:33) Ọchịchọ a na -eme ka anyị bịaruo alaeze Chineke nso. (Mak 12:34) Anyị kwesịrị ịghọta ihe ọ pụtara, 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà' maka Jizọs abịaghị ịkpọ ndị ezi omume kama ọ bụ ndị mmehie. (Matiu 9:13) Ka anyị wee keta ndụ ebighi ebi, anyị kwesịrị ịgụ iwu dị ka, “Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị niile na ike gị niile na uche gị niile hụ Jehova Chineke gị n'anya, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.” (Luk 10: 25-28) Jizọs sịrị, "Mee nke a, ị ga-adị ndụ." (Luk 10:28) Iwu ọhụrụ ahụ Jizọs nyere anyị bụ ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: ebe ọ bụ na ọ hụrụ anyị n'anya, anyị kwesịkwara ịhụ ibe anyị n'anya. (Jọn 13:34) Otu a ka esi mata anyị dị ka ndị na -eso ụzọ ya, na anyị hụrụ ibe anyị n'anya. (Jọn 3:35)
Site na nke a ọ pụtara ihe bụ ụmụ Chineke na ndị bụ ụmụ ekwensu: onye ọ bụla nke na -adịghị eme ezi omume esiteghị na Chineke, ọ bụghịkwa onye na -ahụghị nwanne ya n'anya. (1 Jọn 3:10) N'ihi na nke a bụ ozi ahụ unu nụrụ site na mmalite, ka anyị hụrịta onwe anyị n'anya. (1 Jọn 3:11) Ihe Chineke nyere n'iwu bụ ka anyị kwere n'aha Ọkpara ya Jizọs wee hụ ibe anyị n'anya, dịka o nyere anyị n'iwu. (1 Jọn 3:23) N'ime Kraịst Jizọs ọ bụghị ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù abụghị ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị okwukwe na -arụ ọrụ site n'ịhụnanya. (Gal 5: 6) Site n'ịhụnanya, anyị ga -ejere ibe anyị ozi - maka iwu niile emezuru n'otu okwu: "Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị." (Gal 5: 13-14) Ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, belụsọ ịhụ ibe gị n'anya, n'ihi na onye hụrụ onye ọzọ n'anya emezuola iwu. (Ndị Rom 13: 8) Iwu, "Akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, enwela anyaukwu," na iwu ọ bụla ọzọ, achịkọtara n'okwu a: “Hụ onye agbata obi gị n'anya. dị ka onwe gị. ” (Ndị Rom 13: 9) Ịhụnanya adịghị eme onye agbata obi ihe ọjọọ; ya mere ịhụnanya bụ imezu iwu ahụ. (Ndị Rom 13:10) Ọ bụrụ n'ezie na ị na -emezu iwu eze dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, "Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị," ị na -eme nke ọma. (Jemes 2: 8)
Deuterọnọmi 6: 4-5 Jiri obi gị dum, mkpụrụ obi gị dum, na ike gị hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya
4 "Nụrụ, Izrel: Jehova bụ Chineke anyị, Jehova bụ otu. 5 Ị ga -ahụ Jehova bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum na mkpụrụ obi gị niile na ike gị niile.
Mak 12: 28-34 (ịhụ n'anya) dị nnọọ ukwuu karịa àjà nsure ọkụ na àjà nkịtị
28 Otu n'ime ndị odeakwụkwọ bịakwutere wee nụ ka ha na -arụrịta ụka n'etiti onwe ha, ebe ọ hụrụ na ọ zara ha nke ọma, jụọ ya, "Olee nke kacha mkpa n'ime iwu niile?" 29 Jisọs zara sị, “Nke kacha mkpa bụ, 'Nụrụ, Izrel: Onyenwe anyị Chineke anyị, Onyenwe anyị bụ otu. 30 I g lovewere kwa obi -gi dum, were kwa nkpuru -obi -gi dum, were kwa uche -gi dum, were kwa ike -gi nile, hu Jehova, bú Chineke -gi, n'anya. ' 31 Nke abụọ bụ nke a: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ e nyere n'iwu nke ka ndị a ukwuu. ” 32 Ode -akwukwọ we si ya, I kwuru nke -ọma, Onye -ozizí. I kwuru n'ezie na ọ bụ otu, ọ dịghịkwa ma e wezụga ya. 33 Na iji obi gị niile na nghọta niile na ike niile hụ ya n'anya, na ịhụ onye agbata obi mmadụ n'anya dị ka onwe gị, karịrị ihe àjà nsure ọkụ na àjà niile.. " 34 Ma mgbe Jizọs hụrụ na ọ zara nke ọma, ọ sịrị ya, “Ị nọghị alaeze Chineke.” Ma mb thate ihe ndia gasiri ọ dighi onye ọ bula nwere anya -ike iju Ya ajuju ọzọ.
Matiu 9:13 (Gaa) mụta ihe nke a pụtara: 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ aja
13 Gaanụ mụta ihe nke a pụtara: 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ aja.' N'ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie. "
(Luk 10: 25-28) Hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị
25 Ma lee, onye ọka iwu biliri ka ọ nwalee ya, sị,Onye nkuzi, gịnị ka m ga -eme ka m wee keta ndụ ebighi ebi?" 26 Ọ sịrị ya, "Gịnị ka e dere n’Iwu ahụ? Kedu ka ị si agụ ya? " 27 O we za, si,Ị ga -ahụ Jehova bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum na mkpụrụ obi gị niile na ike gị niile na uche gị niile, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.. " 28 O wee sị ya, "Ị zara nke ọma; mee nke a, ị ga -adịkwa ndụ. "
Ndị Galetia 5: 6 (NIV), n'ime Kraịst Jizọs, ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù adịghị mkpa
Ndị Galetia 5: 13-14 (ESV), iwu ya niile mezuru n'otu okwu: "Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị"
13 N'ihi na akpọrọ unu inwere onwe, ụmụnna. Naanị ejila nnwere onwe gị dị ka ohere anụ ahụ, ma site n'ịhụnanya jeere ibe unu ozi. 14 N'ihi na emezuru iwu ahụ niile n'otu okwu: "Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."
Jemes 2: 8, Ọ bụrụ na ị na -emezu iwu eze dịka Akwụkwọ Nsọ siri dị, ị na -eme nke ọma
(Jọn 13: 34-35) Mmadụ niile ga-eji nke a mara na ị bụ ndị na-eso ụzọ m
34 Iwu ọhụrụ ka m na -enye unu, ka unu hụrịta ibe unu n'anya: dịka m siri hụ unu n'anya, ka unu na -ahụrịtakwa ibe unu n'anya.. 35 Mmadụ niile ga -eji nke a mara na unu bụ ndị na -eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya maka ibe unu. "
1 Jọn 3:10 (NIV), Nnke Chineke - onye na -ahụghị nwanne ya n'anya
10 Site na nke a ọ pụtara ìhè ndị bụ ụmụ Chineke na ndị bụ ụmụ ekwensu: onye ọ bụla nke na -adịghị eme ezi omume esiteghị na Chineke, ọ bụghịkwa onye na -ahụghị nwanne ya n'anya. 11 N'ihi na nke a bụ ozi ahụ unu nụrụ na mbụ, ka anyị hụrịta onwe anyị n'anya.
1 John 3: 23 (ESV), ka anyị kwere n'aha Ọkpara ya Jizọs Kraịst wee hụ ibe anyị n'anya
23 Nka bu kwa ihe O nyere n'iwu, ka ayi kwere n'aha Ọkpara -Ya Jisus Kraist, hu kwa ibe -ayi n'anya, dika O nyeworo ayi n'iwu.
Ndị Rom 13: 8-10 (ESV), Onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya emezuola iwu
8Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụ ibe unu n'anya, n'ihi na onye hụrụ onye ọzọ n'anya emezuwo iwu. 9 Maka iwu, "Akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, enwela anyaukwu," na iwu ọ bụla ọzọ, achịkọtara n'okwu a: "Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị." 10 Ịhụnanya adịghị eme onye agbata obi ihe ọjọọ; ya mere ịhụnanya bụ imezu iwu ahụ.
Mgbe otu nwoke bara ọgaranya jụrụ Jizọs na Matiu 19: 16-21, "Olee ezi ọrụ m ga-eme ka m wee nweta ndụ ebighi ebi," ọ sịrị, "Ọ bụrụ na ị ga-abata na ndụ, debe iwu." Ma mgbe a jụrụ ya ajụjụ banyere ndị ahụ, Jizọs ekwughị ha niile ma ọ bụ iwu niile nke Mozis. Naanị ihe o kwuru bụ iwu isii. Ise n'ime ha sitere n'iwu iri gụnyere, 'Egbula ọchụ, Akwala iko, Ezula ohi, Agbala akaebe ụgha, sọpụrụ nna gị na nne gị, ọ gbakwụnyere,' Hụ onye agbata obi gị n'anya. dị ka onwe gị. Kama ịrịọ maka iwu ahụ dum, ọ rịọrọ ndị otu a họpụtara n'iwu nke kwekọrọ n'ozizi ezi omume ya.
Nwoke ahu we si, Ihe ndia nile ka m'debere, gini fọduru m? Jizọs kwukwara na Matiu 19:21, sị: “Ọ bụrụ na ị ga-ezu okè, gaa ree ihe i nwere nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ̀ n’eluigwe; bịakwa, soro m.” N'ebe a, anyị na-ahụ ụkpụrụ Jizọs abụghị n'ozuzu Iwu Mosis kama ọ bụ ndị bụ isi nke iwu Chineke nke metụtara ịhụ ụmụ mmadụ n'anya na ibi ndụ achọghị ọdịmma onwe onye nanị. Ọ bụrụ na Jizọs ekwere na narị isii na iri na atọ iwu Mozis dị oké mkpa, nke a gaara abụwo ohere zuru okè ikwu otú ahụ. Kama nke ahụ, ihe Jizọs nyere n’iwu bụ ilekwasị anya n’ụkpụrụ nke ịdị mma bụ́ ndị metụtara ịhụnanya na ọrụ ebere. Ụkpụrụ izu okè nke Jizọs bụ ibi ndụ achọghị ọdịmma onwe onye nanị dị ka ohu-ọ bụghị imezu iwu Moses.
Jizọs kwuru, "Hụ ndị iro gị n'anya, meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma, gọzie ndị na -akọcha gị, kpee ekpere maka ndị na -akparị gị. Onye kụrụ gị ihe na ntì, nyekwa ya nke ọzọ, otu onye na -anapụ gị uwe elu gị, egbochila gị uwe ime gị. Nye onye ọ bụla na -arịọ gị arịrịọ, na onye na -anapụ gị ngwongwo gị arịọla ya ọzọ. Dịkwa ka ị chọrọ ka ndị ọzọ mee gị, mee ha otu ahụ. ” (Luk 6: 27-31) Ọ kọwara, “Ọ bụrụ na ị hụrụ ndị hụrụ gị n'anya n'anya, kedu uru ọ baara gị? N'ihi na ọbụna ndị mmehie na -ahụ ndị hụrụ ha n'anya n'anya. Ọ buru kwa na unu eme ezi ihe nye ndi n tome ezi ihe nye unu, àha ekele gini diri unu? N'ihi na ọbuná ndi -nmehie n dome otù ihe ahu. Ọ bụrụkwa na unu agbazinye ndị unu tụrụ anya na ha ga -anata ihe, olee uru ọ ga -abara unu? Ọbụna ndị mmehie na -agbazinye ndị mmehie ihe, ka ha kwụọ ha otu ego ha. ” (Luk 6: 32-34) Kama nke ahụ, ọ gwara anyị, “hụ ndị iro unu n'anya, mee ihe ọma, gbazinye ihe, n'atụghị anya ihe ọ bụla, ụgwọ ọrụ gị ga-adịkwa ukwuu, unu ga-abụkwa ụmụ nke Onye Kasị Elu, n'ihi na na -emere ndị na -enweghị ekele na ndị ọjọọ ihe. ” (Luk 6:35) Anyị kwesịrị ime ebere, dị ka Nna anyị nwere obi ebere. (Luk 6:36) Jizọs sịrị, “Ekpela ikpe, a gaghịkwa ekpe unu ikpe; unu amala ikpé, agaghi -ama kwa unu ikpé; gbaghara, a ga -agbagharakwa gị; nye, a ga -enyekwa gị ya. A ga -etinye ezigbo ihe ọ̀tụ̀tụ̀, nke a bịadara ala, yọkọta ọnụ, nke na -awụda n'elu, n'apata ụkwụ gị. N'ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga -eji tụọrọ unu. ” (Luk 6: 37-38)
Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ okwu Kraịst ma o debeghị ha, ọ kpeghị ha ikpe; n'ihi na ọ bịaghị ikpe ụwa kama ọ bụ ịzọpụta ụwa. (Jọn 12:47) Onye jụrụ Kraịst ma ghara ịnabata okwu ya nwere onye ikpe; okwu nke o kwuru ga -ekpe ha ikpe n'ụbọchị ikpe -azụ. (Jọn 12:48) N'ihi na Jizọs ekwughị n'onwe ya, mana Nna nke zitere ya nyere ya iwu - ihe ọ ga -ekwu na ihe ọ ga -ekwu. (Jọn 12:49) Iwu Chineke bụ ndụ ebighi ebi - Ihe Jizọs kwuru, otu a ka o siri kwuo dị ka Nna gwara ya. (Jọn 12:50) Dị ka ndị kwere ekwe, ekwula okwu ikpe tupu oge eruo, tupu Onyenwe anyị abịa, onye ga -ewepụta ihe ndị zoro ezo n'ọchịchịrị ugbu a wee kpughee ebumnuche nke obi. (1 Ndị Kọrịnt 4: 5) Site na nke a, a na -enye Nna otuto, ka ị na -amị ọtụtụ mkpụrụ wee bụrụ ndị na -eso ụzọ Kraịst. (Jọn 15: 8) Jizọs sịrị, “Dị ka Nna m hụworo m n'anya, otu a ka m hụkwara unu n'anya. Nọgide n'ịhụnanya m. Ọ bụrụ na unu edebe ihe ndị m nyere n’iwu, unu ga -anọgide n’ịhụnanya m, dị nnọọ ka m debere ihe Nna m nyere n’iwu wee nọgide n’ịhụnanya ya. ” (Jọn 15: 9-10) Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, “Ahụrụ m Chineke n'anya,” kpọọ onye ọzọ asị, ọ bụ onye ụgha; n'ihi na onye na -ahụghị ndị ọzọ n'anya enweghị ike ịhụ Chineke n'anya. (1 Jọn 4:20) Iwu a ka anyị nwere n'aka ya: onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya ga -ahụkwa nwanne ya n'anya. (1 Jọn 4:21)
Ebe ewereworo okwukwe gua ayi na ndi ezi omume, ayi na Chineke di n'udo site n'aka Onye-nwe-ayi Jisus Kraist. (Ndi Rom 5:1) Site n'aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibanye n'okwukwe ba n'amara a nke ayi nēguzo nime ya, ayi nāṅuri kwa n'olile-anya nke ebube Chineke. (Ndị Rom 5:2) Olileanya adịghị eme anyị ihere, n'ihi na a wụsawo ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ, nke e nyere anyị. (Ndị Rom 5:5) Ala-eze Chineke abụghị ihe iri na ihe ọṅụṅụ, kama ọ bụ ezi omume na udo na ọṅụ nke Mmụọ Nsọ. (Rom 14:17) Ka anyị na-achụso ihe na-eme ka udo dịrị na ihe na-ewuliri ibe anyị elu. (Ndị Rom 14:19) Ọ dịghị egwu adịghị n'ịhụnanya, ma ịhụnanya zuru okè na-achụpụ egwu - onye ọ bụla na-atụ egwu e mebeghị ya n'ịhụnanya. (1 Jọn 4:18) Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe nile site n’ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ—udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na uche unu nche n’ime ya. Kraịst Jizọs. (Fil 4:6-7) Ihe ọ bụla nke bụ́ eziokwu, ihe ọ bụla a na-akwanyere ùgwù, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla mara mma, ihe ọ bụla e kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto, chebara ihe ndị a echiche. . (Ndị Filipaị 4:8)
Ọmụma na-afụli elu, ma ịhụnanya na-ewuli elu. (1 Ndị Kọrint 8:1) Ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na ya maara ihe, ọ mabeghị dị ka o kwesịrị ịma - ma ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya, Chineke mara ya. (1Kọ 8:2-3) IỌ bụrụ na anyị enweghị ịhụnanya, we bụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ na nnukwu okwukwe na onyinye ime mmụọ. (1Kọ 13:1-2) Ọ bụrụ na anyị enyefe ahụ́ anyị ka e kpọọ anyị ọkụ, ma anyị enweghị ịhụnanya, ọ dịghị ihe anyị ga-erite. ( 1Kọ 13:3 ) Ịhụnanya na-enwe ndidi, ịhụnanya na-adịkwa obiọma; ịhụnanya adịghị ekworo, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ bụghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ọ dịghị esi ọnwụ n'ụzọ nke ya; ọ dịghị ewe iwe ma ọ bụ iwe; ọ dịghị aṅụrị ihe ọjọọ, kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu. (1 Kọr. 13:4-6) Ịhụnanya na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile. (1Kọ 13:7) Ịhụnanya na-adịru mgbe ebighị ebi. (1Kọ 13:8) Anyị kwesịrị ịnọgide n'okwukwe, olileanya, na ịhụnanya; ma nke kacha n'ime ihe ndị a bụ ịhụnanya. (1Kọ 13:13) Ka ihe niile unu na-eme bụrụ n’ịhụnanya. (1Kọ 16:14) Debenụ onwe unu n’ịhụnanya Chineke, na-echere ebere nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke na-eduba ná ndụ ebighị ebi. ( Jud 1:21 ) N’ikwu eziokwu n’ịhụnanya, anyị kwesịrị itolite n’ụzọ nile n’ime onye ahụ bụ́ isi, banye n’ime Kraịst, bụ́ onye na-eme ka ahụ́ ahụ na-eto eto ka o wee na-ewuli onwe ya elu n’ịhụnanya. (Ndị Efesọs 4:15-16) Ka e wepụ iwe na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ niile n'ebe unu nọ, ya na ihe ọjọọ niile. (Ndị Efesọs 4:31) Na-enwenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, na-enwekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu. (Ndị Efesọs 4:32)
(Luk 6: 27-38) Hụ ndị iro gị n'anya, meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma
27 “Ma asị m unu ndị na -anụ, Hụ ndị iro gị n'anya, meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma, 28 gọzie ndị na -akọcha gị, kpee ekpere maka ndị na -akparị gị. 29 Onye kụrụ gị ihe na ntì, nyekwa ya nke ọzọ, otu onye na -anapụ gị uwe elu gị, egbochila gị uwe ime gị. 30 Nye onye ọ bụla na -arịọ gị arịrịọ, na onye na -anapụ gị ngwongwo gị arịọla ya ọzọ. 31 Dịkwa ka ị chọrọ ka ndị ọzọ meere gị, meekwa ha otú ahụ.32 “Ọ bụrụ na ị hụrụ ndị hụrụ gị n'anya n'anya, kedu uru ọ baara gị? N'ihi na ọbụna ndị mmehie na -ahụ ndị hụrụ ha n'anya n'anya. 33 Ọ buru kwa na unu eme ezi ihe nye ndi n tome ezi ihe nye unu, àha ekele gini diri unu? N'ihi na ọbụna ndị mmehie na -eme otu ihe ahụ. 34 Ọ bụrụkwa na unu agbazinye ndị unu tụrụ anya na ha ga -anata ihe, olee uru ọ ga -abara unu? Ọbuná ndi -nmehie n lebinye ndi -nmehie ihe, ka ha we nweghachi ego ole ha nwere. 35 ma hụ ndị iro gị n'anya, mee ihe ọma, gbazinye ego, na -atụghị anya ihe ọ bụla, ụgwọ ọrụ gị ga -adị ukwuu, ị ga -abụkwa ụmụ nke Onye Kasị Elu, n'ihi na ọ na -emere ndị na -enweghị ekele na ndị ọjọọ ihe.. 36 Nwee obi -ebere, dịka Nna -unu nwere obi ebere. 37 “Ekpela ikpe, a gaghị ekpekwa gị ikpe; unu amala ikpé, agaghi -ama kwa unu ikpé; gbaghara, a ga -agbagharakwa gị; 38 nye, a ga -enyekwa gị ya. A ga -etinye ezigbo ihe ọ̀tụ̀tụ̀, nke a bịadara ala, yọkọta ọnụ, nke na -awụda n'elu, n'apata ụkwụ gị. Maka ihe ọ̀tụ̀tụ̀ nke unu ji mee ya ka a ga -eji tụọrọ unu ya. "
(Jọn 12: 47-50), abịaghị m ka m kpee ụwa ikpe, kama ka m zọpụta ụwa
47 Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ okwu m ma ọ naghị edebe ya, agaghị m ekpe ya ikpe; n’ihi na abịaghị m ka m kpee ụwa ikpe mana abịa ịzọpụta ụwa. 48 Onye nāju Mu, nke nānaraghi kwa okwum, nwere onye -ikpé; okwu m kwuru ga -ekpe ya ikpe n'ụbọchị ikpe -azụ. 49 N'ihi na ekwughị m okwu n'onwe m, kama ọ bụ Nna m nke zitere m nyere m iwu ihe m ga -ekwu na ihe m ga -ekwu. 50 Amakwaara m na ihe o nyere n'iwu bụ ndụ ebighi ebi. Ya mere, ihe m na -ekwu, m na -ekwu dị ka Nna gwara m. ”
1 Ndị Kọrịnt 4: 5 (Mb), ekwula ikpe tupu oge eruo, tupu Onyenwe anyị abịa
5 Ya mere ekwupụtala ikpe tupu oge eruo, tupu Onyenwe anyị abịa, onye ga -ewepụta ihe ndị zoro ezo n'ọchịchịrị ugbu a wee kpughee ebumnuche nke obi. Mgbe ahụ onye ọ bụla ga -enweta ịja mma ya site na Chineke.
(Jọn 15: 8-10) Nọgide n'ịhụnanya m
8 Site na nke a, a na -enye Nna m otuto, ka unu na -amị mkpụrụ dị ukwuu wee bụrụ ndị na -eso ụzọ m. 9 Dị ka Nna m hụworo n'anya, otu ahụ ka m hụkwara gị n'anya. Nọgide n'ịhụnanya m. 10 Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n'iwu, unu ga -anọgide n'ịhụnanya m, dịka m debere iwu Nna m wee nọrọ n'ịhụnanya ya..
1 Jọn 4: 20-21 (ESV) Onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya ga-ahụkwa nwanne ya n'anya
1 Jọn 4:18 Egwu adịghị n'ịhụnanya, mana ịhụnanya zuru oke na -achụpụ egwu
18 Egwu adịghị n'ịhụnanya, mana ịhụnanya zuru oke na -achụpụ egwu. N'ihi na egwu nwere ntaramahụhụ, na onye ọ bụla na -atụ egwu emezughị ịhụnanya.
Ndị Rom 5: 1-5 A wụsawo ịhụnanya Chineke n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ
1 Ya mere, ebe a gụrụ anyị n'onye ezi omume site n'okwukwe, ayi na Chineke di n'udo site n'aka Onye -nwe -ayi Jisus Kraist. 2 Site na ya anyị nwetakwara ohere site n'okwukwe n'ime amara a nke anyị guzoro na ya, anyị na -a rejoiceụrịkwa ọ inụ n'olileanya nke ebube Chineke. 3 Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana anyị na -ańụrị ọ inụ na ahụhụ anyị, ebe anyị maara na ahụhụ na -arụpụta ntachi obi, 4 ntachi obi na -amịpụtakwa agwa, agwa na -ewetakwa olileanya; 5 olileanya adịghịkwa eme ka ihere mee anyị, n'ihi na A wụsawo ịhụnanya Chineke n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke enyere anyị.
Ndị Rom 14: 17-19 (ESV), Lna anyị na -achụso ihe na -eweta udo na nke na -ewuli ibe anyị elu
17 n'ihi na ala eze Chineke abughi ihe oriri na ị drinkingụ ihe ọ butụ butụ kama ọ bụ ezi omume na udo na ọ joyụ n'ime Mmụọ Nsọ. 18 Onye ọ bụla nke na -ejere Kraịst ozi bụ onye Chineke na -anabata nke ọma, nke mmadụ nabatara. 19 Yabụ mgbe ahụ ka anyị na -achụso ihe na -eweta udo na nke na -ewuli ibe anyị elu.
(Ndị Filipaị 4: 6-9) Udo nke Chineke ga-eche obi gị na echiche gị nche n'ime Kraịst Jizọs
6 unu echeb aboutula onwe -unu n'ihe ọ bula; kama n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ, ya na ekele, menu ka Chineke mara ihe nile unu nāriọ. 7 Udo nke Chineke, nke kachasi uche nile, g willche kwa obi -unu na èchìchè -uche -unu nche nime Kraist Jisus. 8 N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla kwesịrị nsọpụrụ, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla dị mma. 9 Ihe ị mụtara na nke ị natara na nke ị nụrụ ma hụ n'ime mna -eme ihe ndị a, Chineke nke udo gānọye -kwa -ra unu.
1 Ndị Kọrịnt 8: 1-3. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya, Chineke maara ya
1 Ugbu a gbasara nri a chụrụ n'arụsị: anyị maara na "anyị niile nwere ihe ọmụma." Nke a “Ihe ọmụma” na -afụli elu, ma ịhụnanya na -ewuli elu. 2 Ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na ọ ma ihe, ọ mabeghị ihe o kwesịrị ịma. 3 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya, Chineke maara ya.
1 Ndị Kọrịnt 13 (NIV) okwukwe, olile -anya, na ịhụnanya na -adịgide - nke kacha n'ime ha bụ ịhụnanya
1 Ọ bụrụ na m na -asụ asụsụ dị iche iche nke ndị mmadụ na nke ndị mmụọ ozi, mana enweghị m ịhụnanya, abụ m gong na -eme mkpọtụ ma ọ bụ ájà na -akụ ụda. 2 Ọ bụrụkwa na m nwere ike ibu amụma, ghọtakwa ihe omimi niile na ihe ọmụma niile, ọ bụrụkwa na enwere m okwukwe niile, ka m wee wepụ ugwu, mana enweghị m ịhụnanya, abụghị m ihe ọ bụla. 3 Ọ bụrụ na m na -enye ihe niile m nwere, ọ bụrụkwa na m nyefee ahụ m ka ọ kpọọ ya ọkụ, mana enweghị m ịhụnanya, ọ nweghị uru m ritere.
4 Ịhụnanya nwere ogologo ntachi obi na obiọma; ịhụnanya adịghị ekwo ekworo ma ọ bụ anya isi; ọ bụghị mpako 5 ma ọ bụ mkparị. Ọ dịghị esi ọnwụ n'ụzọ nke ya; ọ dịghị ewe iwe ma ọ bụ iwe; 6 ọ dịghị a rejoiceụrị ọ atụ n'ime ihe ọjọọ, kama ọ na -eso eziokwu aicesụrị ọ rejoụ. 7 Ịhụnanya na -edi ihe niile, na -ekwere ihe niile, na -enwe olileanya ihe niile, na -atachi obi n'ihe niile. 8 Ịhụnanya anaghị agwụ agwụ. Banyere amụma, ha ga -agabiga; asụ asụsụ dị iche iche, ha ga -akwụsị; amaedi ifiọk, enye eyebe efep. 9 N'ihi na anyị maara na akụkụ na anyị na -ebu amụma na akụkụ, 10 ma mgbe onye zuru oke ga -abịa, ile mmadụ anya n'ihu ga -agabiga. 11 Mgbe m bụ nwata, m na -ekwu okwu dị ka nwatakịrị, echere m echiche dị ka nwatakịrị, ana m atụgharị uche dị ka nwatakịrị. Mgbe m ghọrọ nwoke, akwụsịrị m omume ụmụaka. 12 Maka ugbu a, anyị na -ahụ n'enyo n'amaghị ama, mana ihu na ihu. Ugbu a amatala m akụkụ ya; mgbe ahụ ka m ga -amata nke ọma, ọbụna dịka m siri mata nke ọma. 13 Ya mere, ugbu a okwukwe, olile anya na ịhụnanya na -adịgide, ihe atọ a; ma nke kacha n'ime ha bụ ịhụnanya.
1 Ndị Kọrịnt 16:14 Ka e mee ihe niile ị na -eme n'ịhụnanya
14 Ka e mee ihe niile ị na -eme n'ịhụnanya.
Jude 1: 20-23 (ESV), nọrọnụ n'ịhụnanya nke Chineke
20 Ma unu, ndị m hụrụ n'anya, na -ewuli onwe unu elu n'okwukwe unu nke kachasị nsọ, na -ekpekwa ekpere n'ime Mmụọ Nsọ, 21 debe onwe unu n'ịhụnanya Chineke, na -echere ebere Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nke na -eduba na ndụ ebighi ebi. 22 Meekwa ebere nye ndị na -enwe obi abụọ; 23 zọpụta ndị ọzọ site n'ịdọpụta ha n'ọkụ; merenụ ndị ọzọ ebere n'egwu, na -akpọ asị ọbụna uwe nke anụ ahụ merụrụ.
Ndị Efesọs 4: 15-16 (ESV), ahụ-nke na-ewuli onwe ya elu n'ịhụnanya
15 Kama, ikwu okwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga -etolite n'ụzọ niile n'ime onye bụ isi, n'ime Kraịst, 16 onye ahụ onye ahụ, jikọtara ya na ijikọ ya na nkwonkwo ọ bụla ejiri ya kwadoo, mgbe akụkụ ọ bụla na -arụ ọrụ nke ọma ahụ na -eto nke mere na ọ na -ewuli onwe ya elu n'ịhụnanya.
(Ndị Efesọs 4: 31-32) Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, na -enwe obi ọmịiko, na -agbaghara ibe unu
Chineke di nma - rue mb forevere ebighi -ebi ka ebere -Ya di, Ikwesi -ntukwasi -obi -Ya rue ọb generationsọ nile. (Psa 110: 5) Chineke dị ebere ma na -eme amara, na -adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, na -abakwa ụba n'ebere. (Psa 103: 8) Chineke onye nzọpụta anyị chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha nweta ihe ọmụma nke eziokwu. (1Tim 2: 3-4) N'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ akaebe a nyere n'oge ya. (1Tim 2: 5-6) Ya mere anyị na-ekwusa ozioma a n'okwukwe na eziokwu. (1Ti 2: ​​7) E buliri Nwa nke mmadụ elu ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee nwee ndụ ebighi ebi. (Jọn 3: 14-15) N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi. (Jọn 3:16) N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ka ọ maa ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. (Jọn 3:17) Na nke a ka e mere ka ịhụnanya Chineke pụta ìhè n'etiti anyị, na Chineke zitere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa, ka anyị wee dị ndụ site n'aka ya. (1 Jọn 4: 9) Chineke na -egosi ịhụnanya ya maka anyị na na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị. (Ndị Rom 5: 9) Ịhụnanya dị n'onyinye nke ndụ a, na Chineke hụrụ anyị n'anya ma zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmehie anyị. (1 Jọn 4:10) Ọ bụrụ na Chineke hụrụ anyị n'anya otú ahụ, anyị kwesịkwara ịhụrịta ibe anyị n'anya. (1 Jọn 4:11) Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya. (1 Jọn 4:19)
Mgbe Jizọs na -agwa Nna ya okwu n’ekpere, ọ sịrị, “Nke a bụ ndụ ebighi ebi, ka ha mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere Jizọs Kraịst.” (Jọn 17: 3) Jizọs kpekwara ekpere maka ndị niile ga -ekwere, “ka ha niile wee bụrụ otu, dị ka gị, Nna, nọ n'ime m, mụ onwe m dịkwa n'ime gị, ka ha wee dịrịkwa n'ime anyị, ka ụwa wee mee. nwere ike kwere na ọ bụ gị zitere m. (Jọn 17: 20-21) Ebube nke i nyere m ka m nyeworo ha, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị bụ otu, mụ n'ime ha na gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu zuru oke, ka ụwa pụrụ ịma na ọ bụ gị zitere m, hụkwa ha n'anya dị ka ị hụrụ m n'anya. ” (Jọn 17: 22-23) Ọ dịbeghị onye hụtụrụla Chineke; ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke na -anọgide n'ime anyị, ịhụnanya ya zukwara oke n'ime anyị. (1 Jọn 4:12) Ka anyị hụrịta onwe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, onye ọ bụla nke na -ahụ n'anya amụọla ya na Chineke, ọ makwa Chineke. (1 Jọn 4: 7) Onye ọ bụla nke na -adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya. (1 Jọn 4: 8) Ndị kwere ekwe amarala ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ - Chineke bụ ịhụnanya, onye ọ bụla na -anọgidekwa n'ịhụnanya na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. (1 Jọn 4:16) Site n'ịnọgide n'ịhụnanya, ịhụnanya zuru oke n'ime anyị, ka anyị wee nwee ntụkwasị obi maka ụbọchị ikpe. (1 Jọn 4:17). Onyenwe anyị na -enwere anyị ndidi, ọ chọghị ka onye ọ bụla laa n'iyi, kama ka mmadụ niile chegharịa. (2 Pita 3: 9)
Ngọzi nādiri Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye were ngọzi nile nke Mọ Nsọ gọzie ayi nime Kraist n'elu-igwe, dika Ọ rọputara ayi nime Ya tutu ito ntọ-ala uwa, ka ayi we di nsọ na ndi zuru okè n'iru Ya. . (Eph 1: 3-4) Na ịhụnanya o kpebirila anyị maka nkuchi onwe ya dị ka ụmụ site na Jizọs Kraịst, dị ka nzube nke uche ya, na otuto nke ya dị ebube amara, na nke o sirila gọzie anyị na m hụrụ n'anya. (Ndị Efesọs 1:4-6) Chineke, ebe ọ bụ ọgaranya n’ebere, n’ihi ịhụnanya dị ukwuu o ji hụ anyị n’anya, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dịkọọ ndụ ma mee ka anyị na ya kpọlite ​​anyị, sorokwa anyị nọrọ ọdụ. Ya nọ n'ebe di n'elu-igwe nime Kraist Jisus, ka o we gosi n'ọb͕ọ di iche iche nke amara-Ya nke nādighi-anata n'obi-ọma n'ebe ayi nọ nime Kraist Jisus. (Efe 2:4-7) N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa ayi site n'okwukwe, nka bughi kwa nke ayi nēme; ọ bụ onyinye Chineke. (Efe 2:8-9) N’ihi nke a, anyị kwesịrị igbu ikpere n’ala n’ihu Nna anyị, ka o wee mee ka anyị dị ike site n’ike n’ike site na mmụọ ya n’ime ime anyị, ka Kraịst wee biri. n’ime obi anyị site n’okwukwe—ka anyị, ebe agbanyere mgbọrọgwụ na n’ịhụnanya, ka anyị wee mara ịhụnanya nke Kraịst nke karịrị ihe ọmụma, ka anyị wee jupụta n’uju nile nke Chineke. ( Efe 3:14-19
(Abụ Ọma 100: 5) Jehova dị mma; N'ihi na rue mb forevere ebighi -ebi ka ebere -Ya di
5 n'ihi na Jehova di nma; N'ihi na rue mb forevere ebighi -ebi ka ebere -Ya di, na ikwesị ntụkwasị obi ya ruo ọgbọ niile.
(Abụ Ọma 103: 6-8) Jehova anaghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ na-abakwa ụba n’ebere
6 Jehova na -emere ndị niile a na -emegbu ezi omume na ikpe ziri ezi. 7 Ọ n Mosesme ka Moses mara uzọ -Ya nile, Ọ n tome kwa ka umu Israel mara omume -Ya. 8 Jehova dị ebere, na -emekwa amara, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ na -abakwa n’ebere
1 Timoti 2: 3-7 (NIV), Chineke chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịaruo ihe ọmụma nke eziokwu.
3 Nke a dị mma, ọ dịkwa mma n'anya Chineke Onye Nzọpụta anyị, 4 onye chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịarute n'ọmụma nke eziokwu. 5 N'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, 6 onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ akaebe a na -enye n'oge ya. 7 Maka nke a ka a họpụtara m ka m bụrụ onye nkwusa na onye ozi (ana m ekwu eziokwu, anaghị m agha ụgha), onye nkuzi nke ndị mba ọzọ n'okwukwe na eziokwu.
John 3: 14-17 (NIV), n'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na ọ nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya
14 Dika Moses weliri agwọ n'ọhia, ọbuná otú a aghaghi iweli Nwa nke madu elu, 15 ka onye ọbụla kwere na ya wee nwee ndụ ebighi -ebi. 16 "N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na Ọ nyere ọbuná Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi -ebi. 17 N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ka ọ maa ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa.
(Jọn 17: 3) Ndụ ebighi ebi - ka ha mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere bụ Jizọs Kraịst.
3 na nka bu ndu ebighi -ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Onye I zitere, bú Jisus Kraist.
Jọn 17: 20-23ụwa nwere ike mara na ọ bụ gị zitere m, hụkwa ha n'anya dịka ị hụrụ m n'anya
20 “Achọghị m maka ihe ndị a naanị, kamakwa maka ndị ga -ekwere na m site n'okwu ha, 21 ka ha nile we buru otù, dika Gi onwe -gi di nimem, Nna, na Mu onwem di kwa nime gi, ka ha onwe -ha we di kwa nime ayi., ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m. 22 Ebube nke I nyewo m ka m nyeworo ha, ka ha we buru otù dika ayi onwe -ayi bu, 23 Anọ m n'ime ha na gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu zuru oke, ka ụwa wee mara na ọ bụ gị zitere m wee hụ ha n'anya dịka ị siri hụ m n'anya..
1 Jọn 4: 7-12 (ESV) Ka anyị hụrịta onwe anyị n'anya-n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya
7 Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta onwe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, onye ọ bụla nke na -ahụ n'anya amụrụ ya site na Chineke ma marakwa Chineke. 8 Onye ọ bụla nke na -adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya. 9 Nime nka ka emere ka ihu -n'anya Chineke puta ìhè n'etiti ayi, na Chineke zitere Ọkpara Ọ muru nání Ya n'ime uwa, ka ayi we di ndu site n'aka -Ya. 10 Na nke a bụ ịhụnanya, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na ọ hụrụ anyị n'anya wee zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ mgbaghara mmehie maka mmehie anyị. 11 Ndị m hụrụ n'anya, ọ bụrụ na Chineke hụrụ anyị n'anya otu a, anyị kwesịkwara ịhụrịta ibe anyị n'anya. 12 Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb ;e ọ bula; ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke na -anọgide n'ime anyị, ịhụnanya ya zukwara oke n'ime anyị.
(1 John 4: 16-19) Anyị na-ahụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya
16 So anyị amatala ma kwere na ịhụnanya nke Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya, onye ọ bụla na -anọgidekwa n'ịhụnanya na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. 17 Site na nke a ka e mere ka ịhụnanya zuo oke, ka anyị wee nwee obi ike maka ụbọchị ikpe, n'ihi na dịka ọ dị otu a ka anyị dịkwa n'ụwa a. 18 Egwu adịghị n'ịhụnanya, mana ịhụnanya zuru oke na -achụpụ egwu. N'ihi na egwu nwere ntaramahụhụ, na onye ọ bụla na -atụ egwu emezughị ịhụnanya. 19 Anyị na -ahụ n'anya n'ihi na ọ bu ụzọ hụ anyị n'anya.
2 Pita 3: 9, Onyenwe anyị, na -achọghị ka mmadụ laa n'iyi, kama ka mmadụ niile ruo nchegharị.
9 Chineke adịghị egbu oge imezu nkwa ya dị ka ụfọdụ ndị si agụ ya dị nwayọ, kama ọ na -enwere unu ndidi, ọ bughi na onye ọ bula gāla n'iyì, kama ka madu nile biarue ncheghari.
Ndị Efesọs 1: 3-6 (ESV), n'ịhụnanya ka o buru ụzọ kpebie anyị ka anyị bụrụ nwa site n'aka Jizọs Kraịst
3 Onye agọziri agọzi ka Ọ bu, bú Chineke na Nna nke Onye -nwe -ayi Jisus Kraist, Onye ji ngọzi ime mmụọ ọ bụla gọzie anyị n'ime Kraịst n'ime ebe ndị dị n'eluigwe, 4 dika Ọ rọputara ayi nime Ya tutu eme ntọ -ala uwa, ka ayi we di nsọ buru kwa ndi zuru okè n'iru Ya. N'ịhụnanya 5 o burula ụzọ kaa anyị ka anyị bụrụ nwa ya site n'aka Jizọs Kraịst, dị ka nzube ya si dị, 6 ka e wee too amara ya dị ebube, nke o ji gọzie anyị n'ime Onye m hụrụ n'anya.
Ndị Efesọs 2: 4-10 (ESV), site na amara ka e ji zọpụta unu site n'okwukwe
4 ma Chineke, ebe ọ bara ọgaranya n'ebere, n'ihi oke ịhụnanya nke o jiri hụ anyị n'anya, 5 ọbụlagodi mgbe anyị nwụrụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dịkọọ ndụ - site na amara ka a zọpụtara gị- 6 Ọ kpọlitekwara anyị na ya wee mee ka anyị na ya nọdụ ala n'ebe ndị dị n'eluigwe n'ime Kraịst Jizọs, 7 ka ọ we gosi ayi n'amara nke -uku n'amam -ihe nke idi -nma n'amara n'ebe ayi nọ nime Kraist Jisus. 8 N'ihi na amara ka e jiworo zọpụta gị site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị; ọ bụ onyinye Chineke, 9 ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịnya isi. 10 N'ihi na ayi bu ihe -aka -Ya, Onye ekère nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we jegharia nime ha.
Ndị Efesọs 3: 14-19 (ESV), Tokpu nwere ike ibi n'obi gị - gị, na -agbanye mkpọrọgwụ na ịhụnanya
14 N'ihi nke a ka m na -esekpu ikpere m n'ihu Nna, 15 onye akpọrọ ezinụlọ ọ bụla n'eluigwe na n'ụwa aha ya, 16 ka o we nye unu dika ume nke otuto -ya si di, ka enye unu ume site n'ike Mọ Nsọ nime madu ime -unu, 17 ka Kraist we bi nime obi -unu site n'okwukwe -ka unu onwe -unu, ndi nābotedagide nkpọrọgwu, nāmalite kwa ihunanya, 18 nwere ike inwe ike ịghọta na ndị nsọ niile ihe bụ obosara na ogologo na ịdị elu na ịdị omimi, 19 na ịmata ịhụnanya Kraịst nke karịrị ihe ọmụma, ka unu wee jupụta na uju niile nke Chineke.
Anyị na -a rejoiceụrị ọ inụ n'ime Chineke site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị sitere n'aka ya nweta mgbazi ugbu a. (Ndị Rom 5:11) Ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke. (Ndị Rom 5:14) Ndị kwere ekwe na -anata mmụọ nke ịbụ ndị e doro dị ka ụmụ, site na nke ha na -eti mkpu, "Aba! Baba na! ” (Ndị Rom 8:15) Mmụọ nsọ ji mmụọ ha na -agba akaebe na ha bụ ụmụ Chineke, ọ bụrụkwa na ụmụaka bụ ndị nketa — ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na -eketakọ ihe, ma ọ bụrụhaala na ha esoro ya na -ata ahụhụ ka e wee nye ha otuto. ya. (Ndị Rom 8: 16-17) Ahụhụ nke oge a ekwesighi ka atụnyere ebube nke a ga-ekpughe nye ndị nọ na Kraịst. (Ndị Rom 8:18) N'ihi na ihe e kere eke na -echesi ike maka mkpughe nke ụmụ Chineke. (Ndị Rom 8:19) N'ihi na e doro ihe e kere eke ịbụ ihe efu, ọ bụghị site n'ọchịchọ, kama n'ihi onye doro ya, na -enwe olileanya na a ga -eme ka ihe e kere eke n'onwe ya nwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ nke ire ure wee nweta nnwere onwe nke ebube ụmụaka. nke Chineke. (Ndị Rom 8: 20-21) Ndị nwere mkpụrụ mbụ nke Mmụọ, na-asụ ude n'ime ha ka ha na-echesi ike maka nkuchi dị ka ụmụ, mgbapụta nke ahụ ha. (Ndị Rom 8: 22-23)
Anyị maara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị. (Ndị Rom 8:28) N’ihi na ndị ahụ ọ buru ụzọ mara, o K kari a mb a mb͕e ayi buru uzọ buru uzọ buru uzọ buru uzọ buru uzọ buru uzọ buru uzọ mara ha ka ha yie oyiyi nke Ọkpara-Ya, ka o we buru ọkpara n'etiti ọtutu umu-nna-ayi. (Rom 8:29) Anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. (Ndị Rom 8:38) Ma ọnwụ ma ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n’ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke. nime Kraist Jisus Onye-nwe-ayi. (Ndị Rom 8:37-39) Olileanya nke mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi n'oge na-abịa, bụ olileanya nke ịghọ ụmụ Chineke, ịbụ ụmụ nke mbilite n'ọnwụ. ( Luk 20:35-36 ) N’ime Kraịst Jizọs, anyị bụ ụmụ Chineke, site n’okwukwe. ( Gal 3:26 ) Ndị yikwasịworo Kraịst; ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ma-ọbu orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke na nwanyi, n'ihi na ayi nile bu otù nime Kraist Jisus. (Gal 3:27-28) Ma ọ bụrụ na anyị bụ nke Kraịst, anyị bụ ụmụ Ebreham, ndị nketa dị ka nkwa si dị. (Gal 3:29) Mgbe oge ahụ zuru, Chineke zipụrụ Ọkpara ya, nke nwanyị mụrụ, onye a mụrụ n’okpuru iwu, ka ọ gbapụta ndị nọ n’okpuru iwu, ka anyị wee bụrụ ụmụ nwoke. (Gal 4:4-5) Ma n’ihi na ndị kwere ekwe bụ ụmụ, Chineke ezitewo Mmụọ nke Ọkpara ya n’ime obi ha, na-eti, “Aba! Nna!” (Gal 4:6) Ya mere, ndị kwere ekwe abụkwaghị ohu, kama ọ bụ nwa nwoke, ọ bụrụkwa na ọ bụ nwa, yabụ bụrụ onye nketa site na Chineke. (Ndị Gal 4:7)
Ekele diri Nna, onye meworo ka ndi kwere na ha keta oke n'ihe-nketa nke ndi nsọ n'ìhè. (Kọl 1:12) Ọ napụtara ha n’ọchịchịrị wee bufee ha n’alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n’anya, bụ́ onye ha nwere mgbapụta n’ime ya, bụ́ mgbaghara nke mmehie. (Kọl 1:13-14) N’ime Kraịst Jizọs, ha bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ́ ndị eze, mba dị nsọ, otu ndị maka ihe nketa ya, ka ha wee kpọsaa ịdị mma nke onye kpọpụtara ha n’ọchịchịrị baa n’ìhè ya dị ebube. . (1 Pita 2:9) N'oge gara aga, ha abụghị ndị mmadụ, ma ugbu a, ha bụ ndị Chineke; otu mgbe ha anatabeghị ebere, ma ugbua ha enwetawo ebere. (1 Pita 2:10) O kwesịrị ekwesị na Chineke, bụ́ onye ihe nile dị n’ihi na site n’aka ya, n’iweta ọtụtụ ụmụ n’ebube, kwesịrị ime ka onye malitere nzọpụta ha zuo okè site n’ahụhụ. (Hib 2:10) N'ihi na onye na-edo nsọ na ndị e doro nsọ, ha niile nwere otu isi iyi - ya mere ọ naghị eme ihere ịkpọ ha ụmụnna, na-asị, "M ga-agwa ụmụnne m banyere aha gị; n’etiti ọgbakọ ka m ga-abụ abụ otuto gị.” (Hib 2:11-12) Ọzọkwa, “Lee, mụ na ụmụ ndị Chineke nyeworo m.” (Hib 2:13) Ya mere, ebe ụmụaka na-ekekọrịta n'anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya kekwara òkè n'otu ihe ahụ, ka o site n'ọnwụ wee bibie onye ahụ nwere ike ọnwụ, ya bụ, ekwensu. ( Hib 2:14 ) A ɛይ u ch Onyeisi Nchu-aja nwere obi ebere nke kweskwas ntụkwasị obi n’ozi Chineke  gbaghara mmehie nke nd i mmad u. ( Hib 2:17 ) N’ihi na n’ihi na ya onwe ya tara ahụhụ mgbe a nwara ya, o nwere ike inyere ndị a na-anwa aka. (Hib 2:18) Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, onye e bu ụzọ mụọ n’ime ndị nwụrụ anwụ, na onye na-achị ndị eze n’ụwa—site n’ịhụnanya o jiriwo ọbara ya tọhapụ anyị ná mmehie anyị ma mee ka anyị bụrụ alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke ya na ndị nchụàjà. Nna. (Mkpu. 1:5-6)
(Luk 20: 34-36) Ụmụ Chineke, ebe ha bụ ụmụ nke mbilite n'ọnwụ
34 Jisus we si ha, Umu -ndikom nke oge a luru nwunye, ewe nye ha n'ọlụlụ nwunye. 35 ma ndị ahụ e lere anya dị ka ndị ruru eru ka ha ruo afọ ahụ na maka mbilite n'ọnwụ sitere na ndị nwụrụ anwụ anaghị alụ nwunye, a dịghịkwa enye ha di na nwunye, 36 n'ihi na ha enweghị ike ịnwụ ọzọ, n'ihi na ha na ndị mmụọ ozi hà, ha bụkwa ụmụ Chineke, ebe ha bụ ụmụ mbilite n'ọnwụ.
Ndị Galetia 3: 24-29 (ma ọ bụ onye Juu ma ọ bụ onye Grik, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, ọ nweghị nwoke na nwanyị, n'ihi na unu niile bụ otu.
24 Ya mere, iwu bụ onye nche anyị ruo mgbe Kraịst bịara, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site n'okwukwe. 25 Mana ugbu a okwukwe abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru onye nlekọta, 26 n'ihi na nime Kraist Jisus unu nile bu umu Chineke, site n'okwukwe. 27 N'ihi na ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, unu yikwasiri Kraist. 28 Tebe a abụghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, enweghị ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, enweghị nwoke na nwanyị, n'ihi na unu niile bụ otu onye n'ime Kraịst Jizọs. 29 Ọ bụrụkwa na unu bụ nke Kraịst, mgbe ahụ unu bụ ụmụ Abraham, ndị nketa dị ka nkwa si dị.
(Ndị Galetia 4: 4-7) Ka anyị wee nata nkuchi dị ka ụmụ
4 Ma mgbe oge zuru oke mechara, Chineke zitere Ọkpara ya, nke nwanyị mụrụ, amụrụ n'okpuru iwu, 5 iji gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata nkuchi dị ka ụmụ. 6 Ma n'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke ezitela mmụọ nke Ọkpara ya n'ime obi anyị, na -eti mkpu na -asị, “Aba! Baba na! ” 7 Ya mere, ị bụghịzi ohu, kama ị bụ nwa, ma ọ bụrụ na ị bụ nwa, ị bụ onye nketa site na Chineke.
Ndị Rom 8: 12-17 (NIV), ANdị mmụọ nke Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke
12 Ya mere, ụmụnna m, anyị ji ụgwọ, ọ bụghị nke anụ ahụ, ibi ndụ dịka anụ ahụ si dị. 13 N’ihi na ọ buru na i di ndu dika anu-aru si di, inwu anwu, ma ọ buru na i jiri Mọ Nsọ me ka omume nile nke aru di ndu, i gha adi ndu. 14 n'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke. 15 N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka unu wee malite ịtụ egwu ọzọ, kama unu anatala mmụọ nke ịbụ ndị e doro dị ka ụmụ, site na nke anyị na -eti mkpu, "Aba! Baba na! ” 16 Mmụọ nsọ n'onwe ya so mmụọ anyị na -agba àmà na anyị bụ ụmụ Chineke, 17 ọ bụrụkwa na anyị bụ ụmụaka, anyị bụ ndị nketa — ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na -eketakọ ihe, ma ọ bụrụhaala na anyị na ya ata ahụhụ ka e wee mee ka anyị na ya dị ebube..
Ndị Rom 8: 18-23 Anyị onwe anyị - na -asụ ude n'ime anyị ka anyị na -echesi ike maka nkuchi
18 N'ihi na ahurum na ahuhu nile nke oge a adighi-uba mayere ebube ahu nke agaje ikpughe nye ayi. 19 N'ihi na ihe okike na -echesi ike mkpughe nke ụmụ Chineke. 20 N'ihi na e doro ihe e kere eke ịbụ ihe efu, ọ bụghị ọchịchọ ya, kama n'ihi onye doro ya, ka o nwee olileanya 21 na a ga-eme ka ihe e kere eke n'onwe ya nwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ nke ire ure ma nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke. 22 N'ihi na anyị matara na ihe niile e kere eke nọ na-asụkọ ude na ime na-amụ nwa ruo ugbu a. 23 Ọ bụghịkwa naanị ihe e kere eke, kama anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na -asụ ude n'ime anyị ka anyị na -echesi ike dị ka ụmụ, mgbapụta nke ahụ anyị..
Ndị Rom 8: 28-30 (ESV), Ọkpara ya-ka ọ bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne
28 Anyị makwa na ihe niile na -arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ọdịmma, maka ndị akpọrọ dịka ebumnuche ya si dị. 29 Maka ndị ọ buru ụzọ mara, ọ bụkwa ya buru ụzọ họpụta ka o kwekọọ n'onyinyo Ọkpara ya, ka o wee bụrụ onye e buru ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. 30 Ma ndi ọ buru uzọ kpee, ọ kpọ -kwa -ra, ndi ọ kpọ -kwa -ra ka ọ gu -kwa -ra na ndi ezi omume, ndi ọ guru n'onye, ​​o nyekwara ha otuto.
Ndị Rom 8: 37-39 (ESV), Anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye hụrụ anyị n'anya
37 Ọ dịghị, n'ihe ndia nile ayi n moremeri kari site n'aka Onye ahu Nke huru ayi n'anya. 38 N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, 39 ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ ịdị omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, ga -enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.
Ndị Kọlọsi 1: 12-14 (NIV), Nna, onye tozuru oke ịkekọrịta ihe nketa nke ndị nsọ n'ìhè
(1 Pita 2: 9-10) Otu mgbe, unu abụghị otu ndị, ma ugbu a, unu bụ ndị Chineke
9 ma ị bụ agbụrụ ahọpụtara, ọkwa nchụaja nke eze, mba dị nsọ, ndị mmadụ maka ihe nketa ya, ka i wee kwusaa ịdị mma nke onye kpọrọ gị n'ọchịchịrị banye n'ìhè ya dị ebube.. 10 E nwere mgbe unu na -abụghị otu ndị, ma ugbu a, unu bụ ndị Chineke; otu mgbe unu enwetabeghị ebere, mana ugbu a unu emela ebere.
Ndị Hibru 2: 10-18 (ESV), aga m agwa ụmụnne m aha gị
10 N'ihi na ọ dabara nke ahụ Onye ahu, onye ihe nile di kwa n'aka ya, site na iweta otuto otutu umu, kwesiri ime ka onye nzoputa ha zuo oke site na ahuhu. 11 n'ihi na onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi. Ọ bụ ya mere na ihere anaghị eme ya ịkpọ ha ụmụnna, 12 si, “M ga -akọrọ ụmụnne m aha gị; m ga -abụ abụ otuto n'etiti ọgbakọ. ” 13 Ọzọkwa, "M ga -atụkwasị ya obi." Ọzọkwa, "Lee, mụ na ụmụ Chineke nyere m." 14 Ebe ọ bụ na ụmụaka na -ekerịta anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya riri oke n'otu ihe ahụ, ka o wee site n'ọnwụ bibie onye nwere ike nke ọnwụ, ya bụ, ekwensu, 15 ma napụta ndị niile site n'egwu ọnwụ nọ n'okpuru ịbụ ohu n'ogologo ndụ. 16 N'ezie, ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka ọ na -enyere aka, kama ọ na -enyere mkpụrụ Abraham aka. 17 Ya mere, ọ dị mkpa ka eme ya ka ọ dị ka ụmụnne ya n'akụkụ niile, ka o wee bụrụ nnukwu onye nchụaja na -eme ebere na onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ozi Chineke, ka ọ bụrụ ime udo maka mmehie nke ndị mmadụ. 18 N'ihi na ebe ya onwe ya tara ahụhụ mgbe a na -anwa ya, o nwere ike inyere ndị a na -anwa aka.
Mkpughe 1: 5-6 (Ọpụpụ), Onye eburu ụzọ mụọ nke ndị nwụrụ anwụ-mere anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya
5 na site Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa. Nke onye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị 6 na mere anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya, ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ha bụ ihe okike ọhụrụ - ochie agabigawo; le, ihe ọhụrụ abiala. (2 Ndị Kọrịnt 5:17) Ihe a niile sitere na Chineke, onye sitere na Kraịst mee ka anyị na ya dị ná mma wee nye anyị ozi nke ime ka a dị ná mma. (2 Ndị Kọrịnt 5:18) N'ihi anyị, o mere ka ọ bụrụ onye na -amaghị mmehie, ka anyị wee bụrụ ezi omume Chineke n'ime ya. (2 Ndị Kọrịnt 5:21) Anyị kwesịrị ịchọ ijupụta n'ọmụma nke uche Chineke n'ime amamihe na nghọta ime mmụọ niile, ka anyị wee na -eje ije n'ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị, na -eme ya obi ụtọ n'ụzọ zuru ezu: ịmị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla na ịba ụba. ke ifiọk Abasi; ebe ejiri ike nile di ike dika ike ya di ebube si di, iji ntachi obi na ntachi obi niile were ọńụ (Ndị Kọlọsi 1: 9-11)
Ayi aghaghi ime ka ayi nwua ihe di n'uwa nime ayi: ikwa-iko, adịghị ọcha, agu, ajọ ọchichọ, na anya-uku, nke bu ikpere-arusi; N’ihi ihe ndị a ka ọnụma Chineke na-abịa. ( Kọl 3:5-6 ) Anyị aghaghị iwepụ ha nile: iwe, ọnụma, obi ọjọọ, nkwutọ, na okwu rụrụ arụ n’ọnụ anyị. (Kọl 3:8) Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu ewepụla onwe unu ochie ahụ na omume ya, unu yikwasịkwara mmadụ ọhụrụ ahụ, bụ́ nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n’ihe ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị. ( Kọl 3:10 ) Ọ dịghị onye Grik na onye Juu, onye e biri úgwù na onye a na-ebighị úgwù, onye mba ọzọ, ohu, onye nweere onwe ya; n'ihi na Kraist nọ nime ayi nile ndi kwere. ( Kọl 3:11 ) Dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n’anya, yikwasịnụ obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n’obi, ịdị nwayọọ, na ogologo ntachi obi, na-edirịtanụ ibe unu ihe. dika Onye-nwe-ayi b͕aghara gi, otú a ka unu gāb͕aghara kwa. (Kọl 3:12-13) Karịsịa ihe ndị a, yikwasị ịhụnanya, bụ́ nke na-ejikọta ihe nile n’ụzọ zuru okè. (Kọl 3:14) Ka udo nke Kraịst chịkwaa n’obi unu, bụ́ nke a kpọkuru unu n’otu ahụ́. ( Ndị Kọl 3:15 )
Bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n’anya. (Efe 5:1) Na-ejegharị n’ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n’anya ma nyefee onwe ya maka anyị, àjà na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke. ( Efe 5:2 ) Ikwa iko na adịghị ọcha niile ma ọ bụ anyaukwu agaghị adị n’etiti unu, dị ka o kwesịrị ekwesị n’etiti ndị nsọ. (Efe 5:3) Ka ihe ruru unyi ma ọ bụ okwu nzuzu ma ọ bụ njakịrị rụrụ arụ ghara ịdị, nke na-adịghị adị, kama ka e nwee ekele. (Ndị Efesọs 5:4) N’ihi na unu pụrụ ijide n’aka nke a, na onye ọ bụla nke na-akwa iko ma ọ bụ onye na-adịghị ọcha, ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-akwa iko, ma ọ bụ onye na-adịghị ọcha, ma ọ bụ onye na-eme omume rụrụ arụ. onye nwere anyaukwu (ya bu, onye nēkpere arusi), enweghi ihe-nketa n'ala-eze nke Kraist na Chineke. (Ndị Efesọs 5: 5) N'otu oge, ị bụ ọchịchịrị, ma ugbu a, ị bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị - jeenụ ije dị ka ụmụ nke ìhè (n'ihi na a na-achọta mkpụrụ nke ìhè n'ihe niile dị mma na ziri ezi na eziokwu) ma gbalịa ịghọta ihe. ọ nātọ Jehova utọ. (Ndị Efesọs 5:8-10)
Lenu ụdị ihu-n'anya nke Nna ahu nyere ayi, ka ewe kpọ ayi umu Chineke. (1 Jọn 3:1) Ndị bụ́ ụmụ Chineke maara mgbe ọ ga-apụta na ha ga-adị ka ya, n’ihi na anyị ga-ahụ ya otú ọ dị. (1 Jọn 3:2) Onye ọ bụla nke si otú a nwee olileanya na ya na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha dị ka ọ dị ọcha. (1 Jọn 3:3) Onye ọ bụla nke na-eme mmehie na-emekwa mmebi iwu; mmehie bụ mmebi iwu. (1 Jọn 3:4) Kraịst pụtara ka o wepụ mmehie, mmehie adịghịkwa n'ime ya. (1 Jọn 3:5) Ọ dịghị onye ọ bụla nke na-anọgide n'ime ya nke na-anọgide na-emehie; ọ dịghị onye ọ bụla nke na-emehie nke hụrụ ya ma ọ bụ mara ya. (1 Jọn 3:6) Onye ọ bụla nke na-eme mmehie sitere n’ekwensu, n’ihi na ekwensu emehiewo site ná mmalite: ihe mere Ọkpara Chineke ji pụta ìhè bụ ibibi ọrụ ekwensu. (1 Jọn 3:8) Ọ dịghị onye Chineke mụrụ na-eme omume ime mmehie, n'ihi na mkpụrụ Chineke na-anọgide n'ime ya; ma ọ pụghị ịnọgide na-emehie, n’ihi na a mụworo ya site na Chineke. (1 Jọn 3:9) Site na nka ka o putara ìhè ndi bu umu Chineke, na ndi bu kwa umu ekwensu: onye ọ bula nke nādighi-eme ezi omume esiteghi na Chineke, ma-ọbu onye nāhughi nwa-nna-ya n'anya. (1 Jọn 3:10
2 Ndị Kọrịnt 5: 17-21 (ESV), Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ n'ime Kraịst, ọ bụ Onye Okike ọhụrụ
17 Ya mere, ọ buru na onye ọ bula di nime Kraist, ọ bu onye ekère ọhu. Ochie agabigawo; le, ihe ọhụrụ abiala. 18 Ihe a niile sitere na Chineke, onye sitere na Kraịst mee ka anyị na ya dị n'otu wee nye anyị ozi nke ime ka a dị ná mma; 19 ya bụ, n'ime Kraịst, Chineke na -eme ka ya na ụwa dị n'otu, na -agụtaghị njehie ha megide ha, ma nyefee anyị ozi nke ime ka a dị ná mma. 20 Ya mere, anyị bụ ndị nnọchi anya Kraịst, ebe Chineke na -arịọ arịrịọ site n'aka anyị. Anyị na -arịọ unu n'aha Kraịst, ka unu na Chineke dị ná mma. 21 N'ihi anyị, onye na -amaghị mmehie mere ka ọ bụrụ mmehie, ka anyị wee bụrụ ezi omume Chineke n'ime ya.
Ndị Kọlọsi 1: 9-11 (NIV), na-eje ije n'ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị, na-eme ya obi ụtọ
9 Yabụ, site na ụbọchị anyị nụrụ, anyị akwụsịbeghị ikpe ekpere maka gị, na -arịọ nke ahụ ị nwere ike jupụta n'ọmụma nke uche ya n'ime amamihe na nghọta ime mmụọ niile, 10 ka ijeghari n'uzọ kwesiri Onye -nwe -ayi, na -eme ya ezi obi: na -amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla ma na -abawanye na ihe ọmụma nke Chineke.; 11 ebe ewere ike nile di ike dika idi -uku nke ebube -Ya si di. n'ihi ntachi -obi na ntachi -obi nile n'ọ withù;
Ndị Kọlọsi 3: 5-11 (ESV), Pwepụ ha niile: iwe, ọnụma, echiche ọjọọ, nkwutọ, na okwu rụrụ arụ
5 Ya mere, me ka ihe nke ụwa dị n'ime unu nwụọ: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị. 6 Ọ bụ n'ihi ihe ndị a ka ọnụma Chineke ji abịa. 7 N'ime ihe ndị a, gị onwe gị jegharịrị otu ugboro, mgbe ị bi na ha. 8 Ma ugbu a, ị ga -ewepụ ha niile: iwe, ọnụma, echiche ọjọọ, nkwutọ, na okwu rụrụ arụ nke si n'ọnụ gị. 9 Unu agharala ibe unu ụgha, ebe unu wepụrụ mmadụ ochie ahụ na omume ya 10 ma yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na -eme ka ọ dị ọhụrụ na ihe ọmụma dịka onyinyo nke onye okike ya siri dị. 11 N'ebe a, enweghị onye Grik na onye Juu, onye e biri úgwù na onye a na -ebighị úgwù, onye mba ọzọ, onye Sitia, ohu, nwere onwe ya; ma Kraist bu ihe nile, na nime ihe nile.
Ndị Kọlọsi 3: 12-17 Karịsịa ihe niile yikwasị ịhụnanya, nke na -ejikọ ihe niile na nkwekọ zuru oke
12 Yikwasịnụ mgbe ahụ, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị m hụrụ n'anya, obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ndidi, 13 na -ediri ibe unu ihe, ma ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, gbaghara ibe ya; dị ka Onyenwe anyị gbaghaara gị, otu ahụ ka ị ga -esi gbaghara. 14 Karịsịa ihe ndị a niile yikwasị ịhụnanya, nke na -ejikọ ihe niile na nkwekọ zuru oke. 15 Ka udo nke Kraist nwekwa ike n'obi unu, nke akpọrọ unu ka unu bụrụ otu ahụ. Na -enwekwa ekele. 16 Ka okwu Kraist biri n'ime unu n'ụba, na -ezi ihe ma na -adụ ibe unu ọdụ na amamihe niile, na -abụ abụ ọma na abụ na abụ nke mmụọ, were ekele dịrị Chineke n'obi unu. 17 Na ihe ọ bụla ị na -eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na -eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na -ekele Chineke Nna site na ya.
Ndị Efesọs 5: 1-10 (ESV), bụrụnụ ndị na-e ofomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n'anya
1 Ya mere bụrụnụ ndị na -eatorsomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n'anya. 2 Na ejegharị n'ịhụnanya, dịka Kraịst siri hụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị, onyinye na -esi ísì ụtọ na aja nye Chineke.3 Ma agu agaghi-akpọ aha-unu ma-ọbu ọchichọ di iche iche ma-ọbu ọchichọ di iche iche n'etiti unu, dika o kwesiri n'etiti ndi nsọ. 4 Ekwela ka idi-ọcha ma-ọbu okwu nzuzu, ma-ọbu igwu egwu, nke nādighi n'ebe di anya; 5 N'ihi na ị mara nke a, na onye ọ bụla nke na -akwa iko ma ọ bụ na -adịghị ọcha, ma ọ bụ onye nwere anyaukwu (ya bụ, onye na -ekpere arụsị), enweghi ihe nketa n'ala eze Kraist na Chineke. 6 Ekwela ka onye ọ bula duhie unu n'okwu efu: n'ihi na ihe ndia ka iwe Chineke nābiakwasi umu nnupu isi. 7 Ya mere, unu esola ha na -emekọ ihe; 8 n'ihi na ọ dị mgbe unu bụ ọchịchịrị, ma ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Na -eje ije dị ka ụmụ nke ìhè 9 (n'ihi na mkpụrụ nke ìhè dị n'ihe niile dị mma na ihe ziri ezi na eziokwu), 10 gbalịanụ chọpụta ihe dị Onyenwe anyị mma.
1 Jọn 3: 1-10. Hụ ụdị ịhụnanya Nna nyere anyị - ekwesịrị ịkpọ anyị ụmụ Chineke
1 Hụ ụdị ịhụnanya Nna nyere anyị, ka a kpọọ anyị ụmụ Chineke; na otu a ka anyị dị. Ihe kpatara ụwa ejighị mara anyị bụ na ọ maghị ya. 2 Ndị m hụrụ n'anya, anyị bụ ụmụ Chineke ugbu a, na ihe anyị ga -abụ apụtabeghị; mana anyị maara na mgbe ọ pụtara, anyị ga -adị ka ya, n'ihi na anyị ga -ahụ ya dịka ọ dị. 3 Na onye ọ bụla nke nwere olile anya na ya na -eme onwe ya ka ọ dị ọcha. 4 Onye ọ bụla nke na -eme mmehie na -emekwa mmebi iwu; mmehie bụ mmebi iwu. 5 Unu matara na ọ pụtara ka o we wepụ mmehie, na mmehie adịghị n'ime ya. 6 Ọ dịghị onye ọ bụla na -anọgide n'ime ya na -emehie; ọ dighi onye ọ bula nke n onmehie huworo ya, ọ maghi kwa ya. 7 Ụmụntakịrị, ka onye ọ bụla ghara iduhie unu. Onye na -eme ezi omume bụ onye ezi omume, dị ka ọ bụ onye ezi omume. 8 Onye ọ bula nke n ame nmehie si n'ekwensu puta; n'ihi na ekwensu n sinmehie site na mbu. Ihe mere Ọkpara Chineke jiri pụta ìhè bụ ka o bibie ọrụ ekwensu. 9 Ọ dịghị onye ọ bụla a mụrụ site na Chineke na -eme mmehie, n'ihi na mkpụrụ Chineke na -anọgide n'ime ya; ọ pụghịkwa ịnọgide na -eme mmehie, n'ihi na a mụrụ ya site na Chineke. 10 Site na nke a ọ pụtara ìhè ndị bụ ụmụ Chineke na ndị bụ ụmụ ekwensu: onye ọ bụla nke na -adịghị eme ezi omume esiteghị na Chineke, ọ bụghịkwa onye na -ahụghị nwanne ya n'anya.
Ọ bụrụ na unu na -ebi ndụ dị ka anụ ahụ si dị, unu ga -anwụ; ma ọ bụrụ na unu egbuo mmụọ nke mmụọ, unu ga -adị ndụ. (Ndị Rom 8:13) Ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke. (Ndị Rom 8:14) Afọ ojuju anyị sitere na Chineke, Onye meworo ka ayi zuworo ibu ndi-orù nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu, ọ bughi nke leta, kama nke Mọ Nsọ. N'ihi na akwukwọ ahu nēb͕u, ma Mọ Nsọ nēnye ndu. (2Kọ 3:5-6) Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-edu gị, ị nọghị n'okpuru iwu. (Gal 5:18) Chegharịa ma mee baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie gị, ị ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ. ( Ọrụ 2:38 ) Nkwa ahụ dịịrị unu na ụmụ unu na ndị niile nọ n’ebe dị anya, onye ọ bụla Jehova bụ́ Chineke anyị na-akpọ òkù ka ọ bịakwuru ya. (Ọrụ 2:29) A na -awụsa ịhụnanya Chineke n’ime obi ndị kwere na mmụọ nsọ enyere ha. (Ndị Rom 5: 5)
Ndị Rom 8: 13-14 (ESV), Ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke
13 N’ihi na ọ buru na i di ndu dika anu-aru si di, inwu anwu, ma ọ buru na i jiri Mọ Nsọ me ka omume nile nke aru di ndu, i gha adi ndu. 14 N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke.
(2 Ndị Kọrịnt 3: 5-6) Akwụkwọ ozi ahụ na-egbu mmadụ, mana mmụọ na-enye ndụ
afọ ojuju anyị sitere na Chineke, onye mere ka anyị zuo oke ịbụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị n'akwụkwọ ozi kama ọ bụ nke Mmụọ. N'ihi na akwụkwọ ozi na -egbu, ma Mmụọ na -enye ndụ.
NDI GALETIA 5:18 Ma ọ buru na Mọ Nsọ n aredu unu, unu anọghi n'okpuru iwu
18 Ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu.
Ọrụ 2: 38-39 (NIV)
38 Ma Pita sịrị ha,Chegharịanụ ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga -anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.. 39 N'ihi na nkwa ahu diri gi na umu-gi na ndi nile di anya, onye ọ bula Onye Jehova, bú Chineke-ayi, nākpọ onwe-ya.
Ndị Rom 5: 5 (A) awụsawo ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke enyere anyị
n'ihi na A wụsawo ịhụnanya Chineke n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke enyere anyị.